ews of Myanmar's photo.
( ရသစာတမ်း ....)
“ရွှေပြည်မိုး” လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၏ နံနက်ခင်းတစ်ခု။
ကျွန်တော်တစ် ယောက်တည်းဂျာနယ်ကို သဲကြီးမဲကြီးငုံ့ဖတ်နေသည်။ ကျွန်တော်ထိုင်နေ သော စားပွဲသို့ လူနှစ်ယောက်လာပြီးထိုင်သည်။ စကားသံကြား၍ ဂျာနယ်ကို ဖတ်နေရင်း အကဲခတ်လိုက်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံး က အားကစားဝတ်စုံ ကိုယ်စီနှင့် မန္တလေးကျုံးနံဘေးလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာကြသူများဖြစ်မည် ထင်သည်။
တစ်ယောက်က အသက်ကြီးကြီး မြန်မာအမျိုးသား၊ ကျန်တစ် ယောက်က တရုတ်လူမျိုး အဘိုးအို၊ သူက
“ကန်းစွန်းတစ်ခင်းပေးမယ်၊ ဘာ လုပ်မလဲ” ဟုမြန်မာသံ မပီမသဖြင့်မေးသည်။
သူ့မေးခွန်းကို ကျွန်တော်စိတ် ဝင်စားသွားသည်။
“အီဒါပဲဗျ၊ ခီများတို့က ကန်စွန်းရွက်ကို ခူးပြီးရောင်းစားမယ်၊ ဒါပဲသိ လယ်။ ငေါ်ကတော့ အဲဒီကီစွန်းရွက်ကို ကီစွန်းရွက်ကြောလုပ်ပြီးငွေရှာမယ်။ ခီများတို့က တက်တာဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်၊ တူးတက်ဖို့ မီစဉ်းစားဘူး”
ထိုသို့ အခြေအတင် စကားတွေပြောပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ ထသွားကြသည်။ ကျွန်တော်ဖတ်နေသော ဂျာနယ်ထဲတွင် မန္တလေးမြို့အတွက် မင်္ဂလာအိမ် ရာစီမံကိန်းအကြောင်း တံတားဦးလေဆိပ်ကို ဒီထက်အဆင့်မြှင့်တင်မည့် အကြောင်း၊ ဟိုတယ်ဇုန်များ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်မည့်အကြောင်း ခရီးသွား လုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံခြားငွေတိုးချဲ့ရှာနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ အကြောင်းကို ဖတ် ရင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်ဆက်ပြီး ထိုင်နေမိသည်။
×××နာရီကိုငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ ၈နာရီကျော်ပြီ၊ ဆိုင်မှာလည်း လူစုံလာသည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကိုဝင်းမြင့်ရောက်လာသည်။ သူက Acid Man အမည်ဖြင့်စာရေးသည်။ Spider Man, Bad Man ကိုအားကျပြီး Acid Man ဟုအမည်ပေးထားခြင်ဖြစ်သည်။ လွဲရင်ချော်ရင် သရော်မယ်ဆိုတဲ့ ကလောင်အမည်မျိုးပေါ့။ သူက သူ့သမီး “ပိစိ” ကို ဒေါ်မမနိုင်၏ အင်္ဂလိပ် စကားပြောသင်တန်းတွင် အပ်နှံထားသည်။ သင်တန်းက ၁၀နာရီမှဆင်း မည်။ သူ့သမီးကို စောင့်ရင်း “ရွှေပြည်မိုး” လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ရောက်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။သူ့ကို ကျွန်တော်နှင့် အတူထိုင်ဖို့လှမ်းပြီးခေါ်လိုက်သည်။
“ခင်ဗျားကို ကန်စွန်းတစ်ခင်းပေးထားမယ်။ ခင်ဗျားအဲဒီကန်စွန်းခင်းကို ဘာလုပ်မလဲ”“ခင်ဗျားမေးခွန်းကလည်း ဘာခက်တာမှတ်လို့၊ ကန်စွန်းတစ်ခင်းပေးရင် ကန်စွန်းရွက်ကိုခူးမယ်၊ အစည်းလေးတွေလုပ်မယ်၊ ပြီးရင်တစ်စည်းကို တစ် ဆယ်ဗျာ၊ တစ်ရာဖိုးကို ဆယ့်ငါးစည်းပေးမယ်။ ဟဲ…ဟဲ…ဟဲ”
သူ့အဖြေကြောင့် ကျွန်တော်စိတ်ပျက်မိသည်။ ဒါမြန်မာ့အတွေးပဲ၊ ဒါမန္တလေးသားအတွေးပဲ၊ ကျွန်တော်တို့က ဖောက်ထွက်ပြီးမတွေးဘူး၊ ဖြန့် ထွက်ပြီးမတွေးဘူး၊ ပြောင်းပြန်မတွေးဘူး၊ အတွေးမရဲဘူး၊ အတွေးရိုးတယ်။“အတွေးမဆန်း” တော့ “သွေးမလန်း” ဘူး။
ရှေးတုန်းက မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးများ၊ မြန်မာအမျိုးသားကြီးများ ဝတ်စားဆင်ယင်သလိုမျိုးဖန်တီးထားမယ်။ သျှောင်ထုံးကြီးတွေထုံး၊ ထိုး ကွင်းမင်ကြောင်ထိုးထားတဲ့ အမျိုးသားတွေ ညနေပိုင်းဆိုရင် “ဝိုင်းခြင်း” တွေခတ်ကြမယ်ဗျာ။ ပြောင်းဖူးဖက်ဆေးလိပ်ကြီးကိုဖွာပြီး “ဝိုင်းခြင်း” ခတ် နေတာကိုကြည့်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေဖန်တီးထားမယ်၊ ပြီးတော့ သစ်သား ဘီးတပ်နွားလှည်းကြီးတွေ၊ ရထားလုံးတွေလုပ်မယ်၊ နန်းတော်ထဲကိုလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုပြစားမယ်။ Taxi ဆွဲစားမယ်။ နန်းတော်ထဲကို အင်ဂျင် တပ်မီးခိုးထွက် ဘယ်မော်တော်ကားမှ ဝင်ခွင့်မပေးဘူး၊ ဒီနန်းတော်ကြီးထဲ ရောက်လိုက်တာနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ကိုပြန်ရောက်သွားသလိုမျိုး ခံစားစေရမယ်။ အဲဒီခေတ် အခင်းအကျင်းမျိုးကိုပြထားမယ်ဗျာ”ကိုဝင်းမြင့်က မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုသောအကြည့်ဖြင့် ကျွန်တော့်စကားကို သည်းခံပြီးနားထောင်ပေးနေသည်။
“ဒါတင်ဘယ်ကမလဲဗျာ၊ Special Day တွေ၊ Special Month တွေ၊ Special Season တွေလုပ်မယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုဆွဲဆောင်မယ်။ နန် ဝတ်နန်းစားနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ပိုက်ဆံပေးရမယ်၊ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ရင်လည်း ပိုက်ဆံယူမယ်။ ပြီးတော့
“မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းကြီး” တွေထားမယ်။ နတ်ဖိုသံ တွေတီးမယ်။ မှုတ်မယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေဆိုတော့ လမ်းကျယ်ကျယ်ကြီး တွေ၊ တိုက်မြင့်မြင့်ကြီးတွေ၊ အုတ်နဲ့ဘိလပ်မြေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ မြို့ပြ ဆန်ဆန်မြင်ကွင်းတွေကိုမကြည့်ချင်ကြဘူး၊ သူတို့မျက်စိထဲမှာ ရိုးအီ နေပြီ၊ မထူးဆန်းတော့ဘူး၊ မြန်မာဆိုတာ ဒီလိုနေခဲ့တယ်။ ဒီလိုယဉ်ကျေး မှု ရှိခဲ့တယ်။ ရှိနေတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုပြလိုက်ချင်တယ်။ သူတို့က အဲဒါမျိုးမှ စိတ်ဝင်စားတာ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ တွေ့တိုင်း သူတို့ အမြဲပြောတဲ့ သူတို့ အမြင်တွေရှိတယ်ဗျ”
“ရွှေခွက်နဲ့ ခြေဆေးတယ် ဆိုလို့ အထင်ကြိးပြီးပြောတာမထင်နဲ့၊ ရွှေခွက် ကို တန်ဖိုးမထားတတ်ဘူးလို့ပြောတဗျ၊ ခြေဆေးတဲ့ခွက်ကို ဘယ်သူက တန်ဖိုးထားလို့လဲ။ ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်မသိတဲ့လူမျိုးလို့ပြောတာဗျ”
နားထောင်နေသော ကိုဝင်းမြင့် ပျော်မပျော်တော့ကျွန်တော်မသိ၊ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးဖြင့် ကိုယ်ပြောနေရင်ပျော်လာမိသည်။
“မချစ်ဘူးလို့တော့ မပြောရဲပါဘူးဗျာ၊ မချစ်တတ်ဘူးလို့တော့ပြော ရဲတယ်။ ဥာဏ်သွင်းပြီးတော့မချစ်တတ်ဘူးဗျ။ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့တော့ချစ်တတ် တယ်။ လုံခြုံရေးအမြင်နဲ့ပဲချစ်တတ်တယ်။ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်ကတိုးတက် ဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပါ။ ဒါတောင်မှ နန်းတော်ကြီးနဲ့ ကျုံး မြို့ရိုးပေါ်မှာတွေးမိတဲ့စိတ်ကူးနော်၊ ဧရာဝတီတာရိုးပေါ်က ကားလမ်းမကြီး ကို ကောင်းအောင်ပြုပြင်မယ်။ ပြီးတော့ ဧရာဝတီမြစ်အလှကို ပြစာမယ်ဆို ရင်လည်း ရသေးတယ်။
“ဦးပန်တံတား” တို့၊ “မဟာဂန္ဓာရုံ” တို့၊ “မစိုးရိမ် တိုက်ဟောင်း” တို့၊ “မဟာမုနိဘုရားကြီး”တို့၊ “အိမ်တော်ရာဘုရား”တို့ စုံလို့ပါပဲ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပြင်ဆင်ပြီး ဝင်ငွေရှာလို့ရတယ်။ “ပုဂံ”၊ “အင်းလေး”၊ “ကျိုက်ထီးရိုး”၊ “ပုပ္ပားတောင်”၊ “ငပလီ”တို့ မပါသေးဘူးနော်။ သေချာတွေးကြည့်ရင် ကျုပ်တို့တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးဖို့သိပ်ပြီးမခက်ပါဘူးဗျ”။
ကိုဝင်းမြင့်က သူ့လက်ပတ်နာရီကိုငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ ဆယ်နာရီထိုးခါ နီးပြီ။ကျွန်တော့်ကိုအားနာ၍၊ ဒါမှမဟုတ် …သူ့သမီးကို စောင့်ကြိုရင်း အပျင်းဖြေလို၍၊ ဒါမှမဟုတ် …လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး အချိန်ဖြုန်းလို၍ ..... ၍...... ၍...... ၍။ မိတ်ဆွေသဘော အရ စိတ်မပါဘဲနားထောင်ပေးသွားသည် ကို ကျွန်တော် သိပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်ရင်ထဲက အတွေးတွေ၊ စိတ်ကူးတွေကို ပြောလိုက်ရသဖြင့် စိတ်ထဲတွင် တော်တော်ပေါ့ပါးသွားသည်။ တကယ်တော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ၊ လူတွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့စိတ်ကူး ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုလို့ရတဲ့ “လူမူဒီမိုကရေစီ ဘုံဗိမာန်” တွေပဲလေ။
“ဒီမယ် ဆရာဘုန်း၊ ကျုပ်ကိုလည်း ကန်စွန်းတစ်ခင်းမပေးနဲ့၊ ခင်ဗျားကို လည်း ဘယ်သူကမှ မန္တလေးမြို့ကြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူး၊
ဆက်ပြီး စိတ်ကူး ယဉ်လိုက်ဦး၊ကျုပ်ပြန်တော့မယ်ကိုဝင်းမြင့် သည်တရုတ်ပြည်မှလာသော လက်ပတ်နာရီကိုငုံ့ကြည်၊
တရုတ်ပြည်မှလာသော ဆိုင်ကယ်ကိုစီးပြီး …ကျွန်တော့်အပါးမှ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွားသွားသည်။
မူရင်း http://www.facebook.com/marketizers ထံ မှ ပြန်လည်ရယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နေရာမှာ ဖတ်ဘူးတာလေး ဖြည့်စွတ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကာတွန်း လေးပါ ။
စဉ့်အိုးရောင်းတဲ့ သူကို တရုတ်ကြီးက မေးပါတယ် ။
" ဒီစဉ့်အိုးက အသုံးပြုရင် ဘယ်လောက်ခံသလည်း " တဲ့ ။
" ရိုရိုသေသေ သုံးမယ်ဆို တသက်လုံးခံပါတယ် " လို့ မြန်မာက ဖြေတယ် ။
တရုတ်ကြီးက ပြန်ပြောပါတယ် ...။
" အော် ... ဒါကြောင့် မချမ်းသာတာပဲ ..." တဲ့ ။
မိတ်ဆွေ တို့ ၊ ကျွန်တော် တို့ ကို တွေးစရာ တွေ ရကောင်းပါရဲ့ လို့ မျှဝေတာပါ ။
Reference and Credit to -ကိုဝိုင်ဝိုင်ကေ
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 12:40 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook